Modafinil: Xaggee laga helaa tayada sare ee budada Modafinil | Budada AASraw
/blog/Modafinil/Modafinil: Halkee laga gadan karaa tayada sare ee budada Modafinil
Posted on 10 / 29 / 2017 by Dr. Patrick Young ku qoray Modafinil. Waxay leedahay 7 Comments.
Modafinil: Halkee laga gadan karaa tayada sare ee budada cayriinka Modafinil
Modafinil waa daawo rijeeto ah oo loogu talagalay daawada nikotubtarka oo kor u qaadaysa feejignaanta wuxuuna ka hortagaa hurdada. Waxa kaliya oo ay dhacdaa sidoo kale waxay kordhisaa garashada iyo xasuusta, waana mid taariikhi ah oo aad u sarreeya oo ku tiirsan qaybta nootropics.
Sidee modafinil shaqeeyaa xoojining maskaxdaada iyo niyaddaada?
Si ka duwan sida qaar ka mid ah daroogooyinka caqli-gal ah, waxaa jira caddayn wanaagsan oo caddayn ah si loo soo celiyo saameynta Modafinil.
Waxaa la muujiyey inay kordhinayso iska-caabintaaga daal iyo hagaajinta niyaddaada.
Dadka waaweyn ee caafimaadka qaba, modafinil waxay hagaajineysaa "daalka digaaga, dhiirigelinta, waqtiga jawaab celinta iyo feejignaanta."
Daraasad ay soo saartay Jaamacadda Cambridge waxay heshay Modafinil inay waxtar u leedahay yaraynta "jawaab celin", sida, go'aannada xun.
Modafinil xitaa waxay hagaajinaysaa shaqada maskaxda ee hurdada laga jaro dhaqaatiirta.
Waxaa jira caddayn qaar ka mid ah Modafinil oo keliya ayaa ka caawiya dadka IQ hooseeya, laakiin sannado ka dib tijaabinta, ma dareemayso sidaas.
Sidee taasi tahay Modafinil ugu fiican ayaa la qaaday?
Isticmaal modafinil sida uu dhakhtarkaagu amro. Akhri dhammaan macluumaadka la siiyay. Raac tilmaamaha oo idil.
Qaado ama cunto la'aan.
Dhibaatada hurdo-hurda ee shaqada: Ka qaad saacadda 1 ka hor bilawga shaqada.
Neefsaar iyo hurdada hurdo: Qaado dawadan subaxdii.
Maxaan sameeyaa haddii aan seego qiyaasta daawada?
Qaado qiyaasta la seegay isla marka aad ka fekerto.
Haddii ay udhow tahay wakhtiga hurdada, ka boodi qiyaasta la seegay oo aad dib ugu noqotid wakhtigaaga caadiga ah.
Ha qaadan daawooyinka 2 isla waqti isku mid ah ama qadar dheeraad ah.
Halkee to buy tayo sare leh Modafinil?
Xusuusnow sida dhab ahaantii loo wada dhan yahay Modafinil Online waxaa laga soo xigtay Hindiya
Taas macnaheedu waa in badeecooyinka ay bixiyaan goobaha ganacsiga e-macaamiisha ee ugu badan ay yihiin kuwo aan la garanayn. Dhamaan boggaga internetka ee e-macaamiisha ayaa isku dayaya in wax la mid ah!
Markaa markaad qiimeynaysid iibiye, waxaad ka walwalsan tayada alaabta (maxaa yeelay alaabta ay iibiyaan waa isku mid). Si kastaba ha noqotee, waxaad dooneysaa inaad hubiso in iibiyuhu uu ku kalsoon yahay.
Tusaale ahaan, haddii amarkaaga la xiro caadooyinka, iibiyaha ayaa ka jawaabi doona taageerada macaamiisha? Ma bixiyaan beddelaad bilaash ah haddii wax aan la qorshaynin?
Waxaa jira asal ahaan iibiyeyaasha modafinil lagu kalsoonaan karo Maanta waa AASRAW oo ka socda China.
Dubka Modafinil waxaa ka mid ah AASRAW oo ah kuwa ugu badan ee la raadsado ka dib, qiimaha ugu sarreeya ee ugu sarreeya ee suuqa laga helo. AASRAW ayaa hadda ah tikidhada ugu fiican ee la iibiyo ee modafinil online online leh kumanaan qof oo isticmaala raadka ku saabsan xooggeeda.Maxnessmodafil waa Eugeroic ama shuruudaha fudud, wacyi gelinta wakiilka. Dhibaatooyinka modafinil waxaa ka mid ah wacyigelinta, korodhka garashada, xoojinta niyadda, ogeysiinta iyo mararka qaarkood xaalado fudud oo fudud. Haddii aad rabto tayada adiga oo aan gubin god ku jira jeebkaaga, samee bacda budada ee hadda!
Soo iibso budada Modafinil: Waa inaad iibsataa daroogada akhbaarta ee kulul.
Modafinil: Sideen u qaataa budada Modafinil?
Modafinil - Daroogada ugu Sarreeya ee leh Saacadaha Nootropic
Kimberly Horrocks09 / 15 / 2018 at 7: 52 pm
Waxaan jeclaan lahaa inaan ka iibsado 10grams of Modafinil (Nootropics) budada
Dr. Patrick Young06 / 12 / 2018 at 3: 18 am
OK, waad booqan kartaa http://www.aasraw.com/contact/ inaad nala soo xiriirto.
Cerah06 / 11 / 2018 at 3: 24 pm
Sidee ayaan u iibsan karaa daawooyinka aad dib u eegis ugu samaysay sida isutramine iyo modafinil? Sidoo kale csn waa la isugu keenaa?
Dr. Patrick Young04 / 26 / 2018 at 8: 36 pm
Tayada Sare: Sida aan u ballan qaadnay, dhammaan badeecadeena oo nadiif ah aan ka yarayn 98%.
Tyyler Orrrick04 / 26 / 2018 at 6: 53 am
Waxaan jeclaan lahaa inaan qiimeeyo foomka budada LGD-4033, YK-11, Modafinil, GW-501506, MK-2866, iyo MK-677. Mahadsanid.
Dr. Patrick Young03 / 09 / 2018 at 8: 42 pm
0k, Waxaan kuugu soo wacaynaa saacadaha 8
Kelly Anderson03 / 09 / 2018 at 7: 13 am
Waxaan ubaahanahay in aan ka helo budada modafinil
Xagee laga iibsadaa budada stanozolol oo nadiif ah?	Modafinil: Sideen u qaataa budada Modafinil?